कैलालीमा ६५ वर्षीया महिलामा कोरोना पोजेटिभ, नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या १३ - Icatch Khabar
कैलालीमा ६५ वर्षीया महिलामा कोरोना पोजेटिभ, नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या १३
धनगढी । कैलालीको लम्की चुहामा ५५ वर्षीया महिलामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण भेटिएको छ । लम्की चुहा नगरपालिका वडा नं. १ भुरुवाकी ६५ वर्षीया महिलामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको टीकापुर अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उनी वीरगन्जमा सामान्य व्यापार गर्दै आएकी थिइन्। वीरगन्जबाट उनीसहित १७ जना लम्की चुहा नगरपालिकामा चैत्र ९ गते आएका थिए। पहिला क्यारेन्टाइनमा बस्न नमाने पनि पछि सबैले बस्न भनेपछि मानेका थिए। भुरुवामा आफन्त कहाँ बसेकी उनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए ।
चैत्र २५ गते काठमाडौंबाट आएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले क्वारेन्टाइनमा बसेका ५१ जनामध्ये ४४ जनाको र्‍यापिड टेष्ट गरेको थियो। र्‍यापिड टेस्टमा नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई १४ दिनपछि क्वारेन्टाइनबाट छाडिएको थियो। क्वारेन्टाइनबाट छाडिएपछि उनी आफन्तको बस्न थालेकी थिइन्। यसअघि लम्कीकै २१ वर्षीय युवकमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो।
र्‍यापिड टेस्टमा नेगेटिभ आएपनि टोलीले स्वाब समेत संकलन गरी काठमाडौं लगेको थियो। काठमाडौंमा गरिएको परीक्षणमा महिलामा पोजेटिभ देखिएपछि ती महिलालाई आइसोलेनसमा राख्ने तयारी भइरहेको छ। स्थानीय ललित जैशीले उनको गाउँमा आफ्नो घर नभएकाले आफन्तहरुको घरमा बस्दै आएको बताए।
अघिल्लो लेखमावरिष्ठ कृषि तथा अर्थ विज्ञ डा. प्रद्युम्नराज पाण्डेको लकडाउनपछि कृषिमा फट्को
अर्को लेखमाकाेराेनाबाट विश्वभर ज्यान गुमाउनेकाे संख्या १ लाख १९ हजार नाघ्याे, १९ लाख २४ हजार संक्रमित
यो पनि पढ्नुहोस कोरोनाको कारण सचेतना कक्षा र मापसे जाँच पनि स्थगित